मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! तपाइँको यो हफ्ता कस्तो छ ? हेर्नुहोस २०७६ साउन २६ देखी ३२ सम्मको साप्ताहिक राशिफल – " कञ्चनजंगा News "
मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! तपाइँको यो हफ्ता कस्तो छ ? हेर्नुहोस २०७६ साउन २६ देखी ३२ सम्मको साप्ताहिक राशिफल
No Comments on मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! तपाइँको यो हफ्ता कस्तो छ ? हेर्नुहोस २०७६ साउन २६ देखी ३२ सम्मको साप्ताहिक राशिफल
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ : साताको प्रारम्भमा मान्यजनहरु सगँ सामान्य यात्राको योग रहेकोछ । काम काजका क्षेत्रमा त्यति मन नजानाले कार्य क्षेत्रबाट सामान्य अपजसको सामना गर्नु पर्नेछ । मित्रजनहरु सगँको अधिक निकटता झन्झटीलो हुन सक्नेछ । मंगलबार प्रश्चात बिशेष सभा समारोहमा सहभागीताको योग बन्नेछ । मान्यजनहरुको स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । भुमी तथा वाहान शुःख प्राप्त रहनेछ । सामाजिक कार्यमा जुटेर कार्य सम्पादन गर्नाले मान सम्मान प्राप्तीको योग बन्नेछ । कार्य क्षेत्रमा आफनो प्रभुत्व कायम राख्न समयले साथदिएकोछ । साजेदारीका साथमा नयाँकार्यको थालनि आम्दानिका दिर्घकालिन श्रोत बन्ने योग रहेकोछ । योसाता कार्य सम्पादनका क्षेत्रबाट सबैलाई प्रभाबित तुल्याएर आम्दानि हात लाग्नेछ ।
बृष राशि – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो : यो साताको प्रारम्भमा खानपानका क्षेत्रमा बिषेश साबधानि अपनाउनु पर्नेछ अन्यथा स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेको कार्यमा मन नलाग्नाले कार्य क्षेत्रमा समेत ढिलाईको योग बन्नेछ । जिम्बेवारी पूर्ण कार्यमा अग्रसर नरहेकै बेश रहनेछ । नजिकका आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । टाढाँको यात्राका क्रममा सामान्य समस्या देखा पर्ने समय रहेकोले साबधानि अपनाउनु होला । हतासमा गरीएका निर्णयहरुले आफैलाइ कमजोर साबित गर्नेछ । बिहिबार पश्चात भने रोकिएर रहेका कार्यहरु सुचारु गर्न बिशेष समय रहेकोछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यहरुको प्रारम्भको योग बन्नेछ । यो साता स्वास्थका कारण कार्य क्षेत्र प्रभाबित रहन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
मिथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हं: साताको प्रारम्भमा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेयोग रहेकोछ । प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । मंगलबार पश्चात भने बाणीका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । गरीरहेको कार्य वा कार्य स्थल परीर्वतनको सम्भाबना समेत रहेनछ । सामान्य चोटपटकको सामना समेत गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेकोछ । मित्रजनहरु सगँको निकटताका कारण कार्य क्षेत्रमा सामान्य तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । यात्राकाक्रममा सामान्य असहज परीस्थीतीको सामना गर्नु पनेछ । अध्यन अध्यापनमा उचित समय दिन सकिनेछैन । आफ्नै लापरवाहिले सर सामानहरु गुम्न सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । योसाता यात्राकाक्रममा तथा स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पनेछ ।
कर्कट राशि – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो: सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । रोकिएर रहेको काम काज सुचारु गर्न उत्तम समय रहनेछ । देश परदेशको यात्राको योग बन्नेछ । प्रतिश्पदिहरु तपाइको प्रगतिमा दंग रहनेछन । आर्थिक क्षेत्र सबल तुल्याउन मातृपक्षको साथ महत्व पूर्ण रहनेछ । मगंलबार पश्चात भने पारीवारिक सम्बन्धमा सामान्य झमेला उत्पन्न हुन सक्नेछ । शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा समेत प्रभाब पार्नेछ । साजेदारी कार्यमा साबधानि अपनाउनु पर्ने समय रहेकोछ । साताको अन्त्यतिर स्वास्थका क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या जटिल बन्न सक्नेछ । अरुको बिश्वासमा छोढिएका कार्यहरुबाट सामान्य अपजसको भागीदार हुनु पर्ने योग रहेकोछ । नयाँ लगानीमा समेत सजग रहनुहोला योसाता कुनै कार्य सम्पादन गर्न बिशेष गोप्यता आबश्यक रहनेछ ।
सिंह राशि – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे : यो साता गरीरहेको कार्य परीर्वतनको सम्भाबना रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय ब्यतित रहनेछ । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा नयाँ कार्य थालनिको योग बन्नेछ । कला कौशलको प्रयोगले हरकसैलार्इृ मोहित तुल्याउन सकिनेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा जुट्दा सामान्य मान सम्मान समेत प्राप्त रहनेछ । आर्थिक क्षेत्र सबल तुल्याउन सामान्य परीश्रम खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ । देशबिदेशको यात्राका निम्ती समय मध्यम रहनेछ । बिहिबार पश्चात भने ब्यापार ब्यवसायमा नयाँ लगानी गर्नु उत्तम रहनेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । अधुरा कार्यहरु सम्पादन गर्न समय राम्रो रहेकोछ । प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । योसाता तपाईको कार्य प्रगतिको चर्चा चल्नेछ साथै अधुरा लगानि उठाउने दिन समेत रहेकोछ ।
कन्या राशि – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो : भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहेनछ । पारीवारिक सम्बन्धमा सामान्य समस्या देखा पर्ने सम्भाबना रहेकोछ । शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य ढिलाईको योग रहेकोछ । सामान्य अप्रिय खबरले मनलाई चन्चल तुल्याउन सक्नेछ । आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नसक्ने सम्भाबना रहेकोछ । बिद्यार्थी वर्गका निम्ती समय सामान्य कठिन रहनेछ । बौधिक ब्यत्तित्वहरुका सामु आफु कमजोर भएको महसुस रहनेछ । नयाँकार्यमा साजेदारी नगर्नुनै उत्तम रहनेछ । गरीरहेको कार्यमा क्षणिक परीर्वतन तथा ढिलाईको सामना गर्नुपर्नेछ । बिहिबार पश्चात भने अधुराकार्यहरु स्वतः सम्पादित रहनेछन । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा रहेको अनुभब हुन सक्नेछ । योसाता कार्य क्षेत्रमा सामान्य तनब रहेता पनि आम्दानिमा भने असर रहने छैन ।
तुला राशि – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते : मित्रजनहरुको साथसहयोग मनग्य प्राप्त रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । अधुरा कार्यहरु सम्पादन गर्नका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । अधिक आत्मबिश्वासका कारण मनमा घमण्ड उत्पन्न हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । यात्रामा भने सामान्य झमेला रहनेछ । मंगल बार पश्चात भने भौतिक साधनको प्रयोगमा बिषेश साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । पारीवारका सदस्यहरुमा कसैको स्वास्थमा तनाब देखा पर्नेछ । भुमि तथा वाहन शुख प्राप्त रहने योग रहेकोछ । कार्य सम्पादनको श्रेय भने गैरब्यतिहरुले सहजता पूर्णरुपमा प्राप्त गर्नेछन । सवारी साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । साताको अन्त्यमा अध्यन अध्यापनका श्रेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आर्थिक क्षेत्र दरीलो बनाउने खालका कार्यको प्रारम्भ समेत हुने समय रहेकोछ । यो साता मध्यम रहनेछ ।
बृश्चिक राशि – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु : साताको प्रारम्भमा दिर्घकालिन आम्दानिका निम्ती सामान्य लगानि गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । बाणीमा मधुरता छाउनाले रुष्टब्यतिहरु लाई समेत नजिक ल्याउन सफल रहिनेछ । भोजभतेर जन्यकार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । पुराना लगानि उठाउन समयले बिशेष साथ दिएकोछ । साथिभाईहरुको साथसहयोगमा जटिलकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । मान्यजनहरुको मार्गदर्शनमा सभासम्मेलनमा सरीक रहने अवसर प्राप्त रहनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा अधिक समय ब्यतित रहनेछ । आर्थिक क्षेत्र सबल तुल्याउन सामान्य परीश्रम खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ । साजेदारीका साथमा नयाँकार्यको थालनि आम्दानिका दिर्घकालिन श्रोत बन्ने योग रहेकोछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय मध्यम रहनेछ ।
धनु राशि – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे : मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा भने सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ । सभासम्मेलन सम्लग्न रहने समय रहेकोछ । बाणी तथा कला र्कौशलका क्षेत्रबाट आफन्तजनहरु लाई मोहित तुल्याउन सकिनेछ । खानपानका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा भन्ने सामान्य तिक्तता उत्पन्नहुन सक्नेछ । बल तथा प्रराक्रमका क्षेत्रमा कमि भएको महसुस हुनेछ । यात्रामा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । योसाता नयाँ लगनीका साथमा गरीएका कार्यमा बिशेष लाभप्राप्त रहनेछ ।
मकर राशि – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि : साताको प्रारम्भमा सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । नजिकका मित्रजनहरुले धोका दिनाले साजेदारीकार्यमा सामान्य तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । पारीवारका सदस्यहरुबाट टाढा भएको महसुस रहनेछ । भोगबिलाशिताको सरसामान खरिदमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । मगंलबार प्रश्चातभने मान्यजनहरुको सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । नयाँ ब्यापार ब्यवसायमा लगानी लगाउन समयले साथदिनेछ । अध्यन अध्यापनमा रुचि जाग्नेछ । पारीवारिक सम्बन्धमा रहेको समस्या सामान्य सुधारउन्मुख रहनेछ । साताको अन्त्यतिर स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । आफन्तजनहरु सित सामान्य वादविवादको सम्भाबना रहेकोले बिशेष साबधानि रहनुहोला । यो साता आर्थिक कारोबारमा साबधानि अपनाउनुनै उत्तम रहनेछ ।
कुम्भ राशि – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द : साताको प्रारम्भ उत्तम रहनेछ । कला कौशलका क्षेत्रबाट आम्दानि प्राप्त रहनेछ । कार्य क्षेत्रमा मानसम्मान प्राप्तीको योग रहनेछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती समय मध्यम रहनेछ । नयाँ कार्यहरु पनि प्रारम्भहुनेछन । पुराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । मगंलबार पश्चात भने अनावश्यक खर्चका कारण मनमा सामान्य चिन्ताले सताउनेछ । परीवारका सदस्यहरु सगँ सामान्य मनमुटाब रहन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । तपाइको कार्यमा त्रुटिखोज्नेहरु बाटँभने बच्नुपर्ने समय रहेकोछ । साताको अन्त्यतिर अधुराकार्यहरु पून सुचारु गर्न समयले साथ दिनेछ । साजेदारी कार्यमा हात नहाल्नुनै बेश रहनेछ । ब्यपार ब्यवसायमा जिवन साथीको अग्रसरता उत्तम रहनेछ । यो साताको प्रारम्भ तथा अन्त्यमा आर्थिक कारोबार गरे पनि साताको मध्यमा भने सजग रहनु होला।
मीन राशि – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि : गरीरहेको कार्यमा अधिक समय खर्चनु पर्नेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा सामान्य अपजसको सामना गर्नुपर्ने हुदा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । सामान्य अप्रिय खबरले मन बिचल्लीत गराउन सक्नेछ । भौतिक साधनको अधिक उपयोग समेत कष्टकर रहन सक्नेछ । आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा दिर्घकालिन आम्दानिका मार्ग तयार गर्ने अवसार प्राप्त रहनेछ । बौधिक ब्यतित्वहरु सगँको भेटघाटले मन रोमाञ्चीत तुल्याउनेछ । पठन पाठनमा समय उत्तम रहनेछ । साताको अन्त्य तिर भने तात्कालिन आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्ने सम्भाबना रहनेछ । प्रतिपक्षीहरु सबल रहनाले प्रतिस्पर्दाजन्य कार्यमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । यो साता नयाँ कार्यका क्षेत्रमा लगानि गर्न बिशेष सोच बिचार पूर्याउनु होला ।
← यौ*नकर्मी महिलालाई पठाएको म्यासेज भुलवस आफ्नै छोरीलाई पुगेपछि के हालत भयो हेर्नुहोस → आकाशीय पिण्ड पृथ्वी नजिकैबाट गएको यदी उक्त पिण्ड पृथ्वीमा ठोक्किएको भए जापानको हिरोसिमा र नागासाकीको भन्दा पनि ठूलो क्षति हुने